Agrello Delta စျေး - အွန်လိုင်း DLT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Agrello Delta (DLT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Agrello Delta (DLT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Agrello Delta ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 944 324.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Agrello Delta တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Agrello Delta များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Agrello DeltaDLT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0605Agrello DeltaDLT သို့ ယူရိုEUR€0.0513Agrello DeltaDLT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0464Agrello DeltaDLT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0552Agrello DeltaDLT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.541Agrello DeltaDLT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.382Agrello DeltaDLT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.34Agrello DeltaDLT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.226Agrello DeltaDLT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0802Agrello DeltaDLT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0845Agrello DeltaDLT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.35Agrello DeltaDLT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.469Agrello DeltaDLT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.329Agrello DeltaDLT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.53Agrello DeltaDLT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.19Agrello DeltaDLT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.083Agrello DeltaDLT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.092Agrello DeltaDLT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.88Agrello DeltaDLT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.42Agrello DeltaDLT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.47Agrello DeltaDLT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩71.65Agrello DeltaDLT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦23.21Agrello DeltaDLT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.47Agrello DeltaDLT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.67
Agrello DeltaDLT သို့ BitcoinBTC0.000005 Agrello DeltaDLT သို့ EthereumETH0.000158 Agrello DeltaDLT သို့ LitecoinLTC0.00111 Agrello DeltaDLT သို့ DigitalCashDASH0.000667 Agrello DeltaDLT သို့ MoneroXMR0.00068 Agrello DeltaDLT သို့ NxtNXT4.72 Agrello DeltaDLT သို့ Ethereum ClassicETC0.00892 Agrello DeltaDLT သို့ DogecoinDOGE17.47 Agrello DeltaDLT သို့ ZCashZEC0.000735 Agrello DeltaDLT သို့ BitsharesBTS1.87 Agrello DeltaDLT သို့ DigiByteDGB1.94 Agrello DeltaDLT သို့ RippleXRP0.215 Agrello DeltaDLT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00209 Agrello DeltaDLT သို့ PeerCoinPPC0.201 Agrello DeltaDLT သို့ CraigsCoinCRAIG27.59 Agrello DeltaDLT သို့ BitstakeXBS2.58 Agrello DeltaDLT သို့ PayCoinXPY1.06 Agrello DeltaDLT သို့ ProsperCoinPRC7.6 Agrello DeltaDLT သို့ YbCoinYBC0.00003 Agrello DeltaDLT သို့ DarkKushDANK19.43 Agrello DeltaDLT သို့ GiveCoinGIVE131.13 Agrello DeltaDLT သို့ KoboCoinKOBO13.79 Agrello DeltaDLT သို့ DarkTokenDT0.0558 Agrello DeltaDLT သို့ CETUS CoinCETI174.86
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 00:25:02 +0000.